पोखरामा भारतीय अन्तर बटालियन भू.पू. सैनिक गोल्डकप बास्केटबल च्याम्पियनसीप शुरु | JanaSammat.com
पोखराको रामबजारस्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पका ईञ्चार्ज लेफ्टिनेन्ट कर्णेल शशाङ्क त्रिपाठीले एक कार्यक्रमबीच रेफ्रीलाई बल हस्तान्तरण गरेर प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका हुन्
पोखरा । पोखरामा पाँचौ संस्करणको भारतीय अन्तर बटालियन भू.पू. सैनिक गोल्डकप बास्केटबल च्याम्पियनसीप शुरु भएको छ ।
भूतपूर्व सैनिक खेलाडी संघ, गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा शनिबारदेखि शुरु च्याम्पियनसीपमा १३ टिमको सहभागिता छ ।
पोखराको रामबजारस्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पका ईञ्चार्ज लेफ्टिनेन्ट कर्णेल शशाङ्क त्रिपाठीले एक कार्यक्रमबीच रेफ्रीलाई बल हस्तान्तरण गरेर प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका हुन् ।
पोखरा–१४ स्थित काजीपोखरी बास्केटबल कोर्टमा शुरु प्रतियोगिताको पहिलो दिन ६ वटा खेलहरु सम्पन्न भएको संघका सचिव कृष्ण चन्द ठकुरीले जानकारी दिएका छन् । चन्दका अनुसार सम्पन्न खेलहरुमा थर्ड/ऐट, फोर्थ/फस्र्ट, थर्ड/फोर्थ, थर्ड/नाइन, थर्ड/ऐट र फस्र्ट/थर्ड गोर्खा राइफल्सले विजयी शुरुवात गरेका छन् ।
शनिबार भएको पहिलो खेलमा थर्ड/ऐट गोर्खा राइफल्सले २ खेल जित्दै क्वाटरफाइनल प्रवेश गरेको छ । थर्ड/ऐट गोर्खा राइफल्सले पहिलो खेलमा फाइव/नाइन गोर्खा राइफल्सलाई ६१–४७ ले हरायो । त्यस्तै, दोस्रो खेलमा थर्ड/ऐट गोर्खा राइफल्सले नै सेकेन्ड/थर्ड गोर्खा राइफल्सलाई ५०–३९ ले हराउँदै क्वाटरफाइनलमा प्रवेश ग¥यो ।
शनिबार नै भएको अन्य खेलमा फोर्थ/फस्र्ट गोर्खा राइफल्सले फाइव/फोर्थ गोर्खा राइफल्समाथि ४४–४२ ले कठिन जित निकाल्यो । त्यस्तै, अर्को खेलमा थर्ड/फोर्थ गोर्खा राइफल्सले सेकेन्ड/फस्र्ट गोर्खा राइफल्सलाई ७०–४० को फरक स्कोरले पन्छायो ।
शनिबार नै भएको अर्को खेलमा थर्ड/नाइन गोर्खा राइफल्सले फाइव/फाइव गोर्खा राइफल्समाथि ६३–३५ को फरक स्कोरमा सहज जित निकाल्यो । त्यसैगरी, फस्र्ट/थर्ड गोर्खा राइफल्सले फोर्थ/फस्र्ट गोर्खा राइफल्समाथि ४४–२१ को अन्तरले पाखा लगायो ।
शनिबार नै हुने भनिएको २ खेलबाट फाइब/नाइन र सिक्स/ऐट गोर्खा राइफल्सले वाकओभर पाएको छ । खेल तालिकाअनुसार फोर्थ/नाइन गोर्खा राइफल्स खेलमा अनुपस्थित भएपछि दुबै टिमले वाकओभर पाएको संघका अध्यक्ष क्याप्टेन प्रेमप्रसाद गुरुङले जानकारी दिएका छन् । फोर्थ/नाइन गोर्खा राइफल्सले शनिबार पहिलो खेल फाइव/नाइन र दोस्रो खेल सिक्स/ऐट गोर्खा राइफल्ससँग खेल्नुपर्ने तालिकामा उल्लेख थियो ।
यसअघि, भूतपूर्व सैनिक खेलाडी संघ, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष क्या.प्रेमप्रसाद गुरुङको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष बलबहादुर गुरुङको स्वागत मन्तव्य र सचिव कृष्णचन्द्र ठकुरीको संचालनमा उद्घाटन कार्यक्रम भएको थियो ।